Siyaasad Archives - Boga Wise Man
Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Labaad.
Waxa kaloo muhiima akhriste inaad ogaato dhaawaca weyn ee heshiiskii DP World iyo Saldhiga Madaarka Berbera u geystay hanaan socodka dawladnimada Somaliland. Ugu horeyn dawlada Somaliland xaq umay lahayn inay wax heshiisa gasho maadaama sanadka ugu dambeeya dastuurku ka mamnuucayo inay dawladi gasho wax heshiisa oo mugweyn. Dawladii Siilaanyana wakhtigaa waxaabay ku shaqaynaysay muddo korodhsi […]
Taariikhda Burburka Somaliland. Qaybta 1aad..
Dhaqaale | Siyaasad
Ma Khasabaa In Dumarku Shaqeeyaan?
Ma Khasabaa In Dumarku Shaqeeyaan? Iska daa dumarkee, maalin dhaw waxa imanaysa in badanka shaqooyinka adduunku ay meesha ka baxaan oo robots (aalado computer ah oo is wada) ay shaqooyinkan qabtaan. Iska daa inay dumarku shaqeeyaane raga ayaa xataa laga maaramayaa inay shaqeeyaan. Shaqooyinkani waxay noqon doonaan kuwa xirfada sare ah iyo kuwa xirfada hoose […]
Ghazwatu Xuneyn iyo Somaliland
Ghazwatu Xuneyn. Dagaalkan Rasuulku, calayhi salaatu wasalaam, markuu guuleystay ee xoolo badana gacant ku qabtay wuxuu badanka xoolihii u qaybiyey niman Islaamka ku cusbaa. Si uu Islaamka u jecleysiiyo oo waxa uu qadiyey ama xoolihii u qadhiidhay ansaartii difaacaysay illaa markii uu Makkah kasoo hijrooday. Diiniyan in quluubta dadka xoolo lagu hanto oo Islaamka loogu […]
Maxaynu Beenta Ugu Noqnoqonaa?
Horta maxaynu beenta isugu sheegnaa? Hadii Somaliland doorashooyinku is daba joog noqdaan iyo hadaan la qabanba wax is bedel siyaasadeed ah oo horumar dhaliyaa iman maayo. Goleyaasha Deegaanka iyo Wakiilada ee cusub maxaa keenaya inay noqdaan kuwo dhaama kuwan imika wakhtiga dheeraadka ah fadhiya? Inay meesha ka riixdaan mooyee miyay idinla tahay inay qorshe kale […]
Somaliland Dagaal Hoose Ayaa Kusocda
Waxbaa Jira Ninbaa xalay I weydiiyey beesha caalamku haday rabaan shiidaalka Somaliland mar hore ayay soo saari lahaayeen sida kuwa dalalka kale ee Afrikaanka ah maxay uga meeraystaan? Su’aashii ayaa igu dhalisay su’aalo kale oo badan. Waxaana ii soo baxay in arrinka beesha caalamku ka leedahay Soomaalidu uu ka duwan yahay ka ay Carabta iyo […]
Dhaqaale | Nolol | Siyaasad
Aragtida Aan Ka Fa’iidey Hadraawi – Qaybta 1aad
Ilbaxnimada bulshooyinka waxa laga eegaa laba meelood. Siday u ixtiraamaan aqoon yahanadooda iyo maskaxahooda quruxda badan. Siday danyartooda uga warhayaan uguna roon yihiin. Labadan arrimood een kor kusoo xusnay inta badan diinta Islaamka ayaa qofka ku boorisa. In kuwa cilmiga leh wax la weydiiyo iyo in kuwa taagta daran la daryeelaa waa akhlaaq wanaaga diinteena. […]
Hal-hays baa jira Ingiriisi ah oo yidhaa ” follow the money”. Badankana dagaalada caalamka ka dhaca iyo xataa gumeysigii reer Yurub wuxuu ku salaysnaa dano dhaqaale. Maantana sidaynu ognahay wadamada khayraadkooda u diida inay gacmo shisheeya hantiyaan waxa lagu qaadaa dagaalo waxaana lagu tilmaamaa nidaamyadooda maamul keligi telisnimo. Wadamadan waxay leeyihiin gaalo iyo Islaamba. Tusaale […]
Godobtii Boqolka Sanadood
Illaahay, Subxaanahu Wa Tacaalaa, ayaa adduunka xukuma! Allena adoomihiisa if iyo aakhiroba wuu ugu garqaadaa uguna xaqsooraa. Nabi Muuse calayhi salam ayaa mar Illaahay weydiiyey masaladan. Allena wuxuu u tilmaamay inuu meel ceel ahayd tago oo fadhiisto kadibna eego waxa ka dhaca. Ceelkii waxa soo maray nin faras wata oo haraadan, wuu ka cabay ceelkii, […]
Siyaasada iyo Maareynta Nolosha
Horta siyaasadu wax kale maaha ee waa farsamada iyo qaabka loo xaliyo dhibaatooyinka bulshada. Tusaale ahaan arday kastaa wuxui leeyahay siyaasad uu imtixaanka ugu diyaar garoobo. Ardayda qaar waxay diyaar garawga bilaabaan bil ka hor imtixaanka. Qaar waxay bilaabaan laba bilood ka hor, halka qaarna marka iskuulka la bilaaboba ay diyaargarawga sii bilaabaan. Qolo’na maba […]